ကောလိပ်ကျောင်းမှကလေးတစ်ဦးကိုချွတ်ပေးပို့ခြင်း | USAHello | USAHello
ကောလိပ်ကျောင်းမှကလေးတစ်ဦးကိုချွတ်ပေးပို့ခြင်းအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျဦးနှောက်အာရုံကြောများနှင့်ပျော်ရွှင်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ဒါဟာတမိသားစုလုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်. သင့်ကလေးပွငျဆငျပွီးကူညီပေးဖို့ဘယ်လောက်ထွက်ရှာမည်. ကျောင်းသားန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာပါ, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဝယ်ယူ, နှင့်ချိတ်ဆက်တည်းခို.
ကောလိပ်ကျောင်းမှချွတ်သောသူသည်ကလေးတစ်ဦးရှိခြင်းတို့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်! ဒါဟာကြီးမားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြောင်းအလဲ. သို့သော်ကောလိပ်သွားရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်. သင့်ကလေးကိုကောလိပ်ကျောင်းအကြောင်းကိုဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်နိုင်သည်.
ပဌမနေ့ရှေ့တော်၌ထိုတက္ကသိုလ်နယ်မြေသွားရောက်သေချာအောင်လုပ်ပါ. တချို့ကကောလိပ်အလွန်ကြီးမားများမှာ, နှင့်သင့်ကလေးအတွက်ကိုဆုံးရှုံးတဲ့စိုးရိမ်စေခြင်းငှါ. သူတို့ကဘယ်မှာအစားအစာသို့မဟုတ်လေ့လာမှုအရမသိစေခြင်းငှါ. အရာအားလုံးသည်အဘယ်မှာရှိသိမှတ်ကြလော့သူတို့ကိုပိုပြီးယုံကြည်မှုစေမည်. ကောလိပ်များအသစ်သောကျောင်းသားများအတွက်အထူးသွားရောက်လည်ပတ်ရက်. သူသို့မဟုတ်သူမ enrolls အခါသင်၏ကျောင်းသားသွားရောက်လည်ပတ်ရက်ပေါင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မရကြလိမ့်မည်.
သငျသညျရှိပါတယ်စဉ်အကူအညီလိုလျှင်, သင်ကျောင်းသားန်ဆောင်မှုများရုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. သူတို့ကမြေပုံနှင့်အဖြေကိုမေးခွန်းများကိုအတူသင်တို့ပေးနိုငျ. ကျောင်းသားများအချိန်မရွေးသူတို့ကောလိပ်မှာဖြစ်သည့်အခါသူတို့အကူအညီလိုကြောင်းကျောင်းသားန်ဆောင်မှုများရုံးကိုသွားနိုင်ပါတယ်. ဥပမာ, သူတို့အတန်းယူရာသေချာမသိကြပါလျှင်၎င်းတို့သည်သွားနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ကျောင်းကမှတ်ပုံတင်ကဒ်ကိုဆုံးရှုံးလျှင်.
တချို့ကကောလိပ်များဆောင်ပြီ (“အိပ်ဆောင်” တိုတောင်းသောအဘို့). တစ်ဦးကအိပ်ဆောင်ကျောင်းသားများကိုနေထိုင်အများအပြားခန်းနှင့်အတူအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်. အိပ်ဆောင်များသောအားဖြင့်တိုက်ခန်းများထက်အများကြီးစျေးသက်သာရှိပါတယ်. အသက်ရှင်သောကုန်ကျစရိတ်အားလုံးတဦးတည်းစျေးနှုန်းတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်. လုံခြုံရေးကင်မရာများနှင့်အစောင့်အဲဒီမှာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအစအားလုံးဘေးကင်းကြ. အားလုံးနီးပါးကျောင်းသားများကိုကောလိပ်မှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်ကာလအတွင်းအခန်းဖော်များ, သူတို့နထေိုငျသညျ့နရောနေပါစေ.
သင့်ကလေးကိုအိပ်ဆောင်တွင်နေထိုင်လိုပါက, အစောပိုင်းသူတို့ကို sign up ကို. အခန်းကန့်သတ်ငွေပမာဏရှိပါတယ်.
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်အိမျတျောကိုရှာတွေ့မှ, ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာအွန်လိုင်းကိုကြည့် rent.com, craigslist.org, ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းရဲ့ website တွင်. တော်တော်များများသောနေရာများမှာကြည့်ဖို့အချိန်ကိုယူ. ရေနှင့်လျှပ်စစ်မီးငှားတွင်ထည့်သွင်းလျှင်မေးပါ. သင့်ကလေးကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိပါက, အဆောက်အဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များခွင့်ပြုပါလျှင်မမေး. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုစဉျးစားနှင့်မည်သို့နီးစပ်ကကျောင်းမှာရန်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျနိမိတျလက်ခဏာကိုမပြုမီဂရုတစိုက်စာချုပ်ဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ. သငျသညျမတတျနိုငျပါလျှင်, သင်ကူညီနိုငျသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးရှာတွေ့.
အိပ်ရာအထည်အလိပ် (စောင်, ခေါင်းအုံး, စာရွက်များနှင့် pillowcases)
desk ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ: မှတ်စုအပြား, ခြံ, ပြီးစားပွဲပေါ်မှာဆီမီးခွက်
ကွန်ပျူတာ: လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာရှိသည်ဖို့အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သင်တဦးတည်းမတတ်နိုင်လျှင်, သငျသညျကျောင်းသားန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် Low-ဝင်ငွေကျောင်းသားများကိုကူညီပေးသည်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှတဆင့်တဦးတည်းကိုတောင်းခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်. သင့်ကလေးကိုလည်းစာကြည့်တိုက်မှာကွန်ပျူတာဓာတ်ခွဲခန်းကိုသုံးနိုင်သည်.
ရေချိုးခန်းသုံးခြင်းတောင်း: အဝတ်လျှော်စက်ကိုအိမျ၌ရှိမပါလျှင်, ဘီးနှင့်တသားတဝယ်ဖို့. ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူသည်သင်၏ကလေးသည်ပင်းမင်းဆိုင်ကယူရန်အဘို့အစေမည်. လူတွေနေတဲ့အဝတ်လျှော်စက်နှင့်လေမှုတ်စက်သုံးစွဲဖို့ပေးဆောင်ရှိရာတစ်ဦးကပင်းမင်းဆိုင်ဖြစ်ပါသည်.
သန့်စင်ခန်းသုံး: သွားတိုက်ဆေးနှင့်သွားတိုက်တံ, ဖြီး / ဖြီး, ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆပ်ပြာ, deodorant
အီလက်ထရောနစ်: နားကြပ်နဲ့ extension ကြိုး
သင်၏သားသမီးတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်. သူတို့ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုမသိလျှင်, လွယ်ကူသောအစားအစာများကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသူတို့ကိုပြသ. ဟင်းချက်စားသောက်ဆိုင်မှာပိုက်ဆံတွေအများကြီးဖြုန်းမှသူတို့ကိုစောင့်မမည်. ဘယ်မှာကျန်းမာပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့စားစရာဘို့စျေးဝယ်ဖို့သူတို့ကိုသှနျသငျ.
သင့်ကလေးရေချိုးခန်းလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိမပါဘူးဆိုရင်, သူတို့ကိုပြလိုက်. သူတို့တစ်တွေကားကိုရပါလိမ့်မယ်ဆိုပါက, ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုသူတို့ကိုသင်ပေး. အခါဘယ်လို၎င်းတို့၏ရေနံစစျဆေးဖို့သူတို့သိသေချာအောင်လုပ်ပါ, ရေ, နှင့်တာယာ.
သင်သည်သင်၏ကလေးသည်သင်ပေးလို့ရပါတယ်အရေးအပါဆုံးအရာကသူတို့ပိုက်ဆံဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်. ကုန်ကျစရိတ်နှင့်မည်သို့သူတို့သိပ်ပိုက်ဆံမဖြုန်းပါဘူးဒါကြောင့်ဘတ်ဂျက်စေရန်အကြောင်းပြောဆို. ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြပါနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့မကျင့်လျှင်ဖြစ်ပျက်. သင်သည်သင်၏ကလေးသည်ခရက်ဒစ်ကဒ်ရှိသည်ဖို့လိုပါလျှင်, သူတို့စွန့်ခွာမတိုင်မီတဦးတည်းရယူ. တခါတရံမှာခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်စျေးကြီးခရက်ဒစ်ကဒ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျောင်းသားများအခိုးရန်ကြိုးစား. သင်ယုံကြည်စိတ်ချရမယ့်ဘဏ်ထဲကနေတစ်ကဒ်ရဖို့ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်.
သင့်ကလေးဟာသူတို့ရဲ့အိမ်နှင့်မိဘများလက်လွတ်လိမ့်မယ်. ပဌနာနှင့်သူတို့လုပ်နေတာဘယ်လိုကြည့်ဖို့အချိန်ယူပါ, သူတို့ပျော်ရွှင်ပုံပေါ်လျှင်ပင်. သင်တို့သည်လည်းထိုသူတို့စောင့်ရှောက်မှု packages များပေးပို့နိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးကပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအထုပ်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်မှုအရာနှင့်ပြည့်စုံတစ်သေတ္တာဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကိုသင်ဆပ်ပြာနဲ့တူထိုသူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုသုံးပါမကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်နေ့တိုင်းအမှုအရာမလိုက်မသွားပါလိမ့်မယ်အစာပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ခေါငျးလြျှောရညျ, သို့မဟုတ်ပန်းကန်ဆေးစက်အရည်.
သူတို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိဘမြားစှာကောလိပ်ကျောင်းမှာသူတို့ကလေးတွေကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု. သူတို့သည်လည်းဝေးလျှင်ဤသည်ခက်ခဲများနှင့်စျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်. သင်လုပ်နိုင်လျှင်, ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကြိုတင်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့. သင်သည်သင်၏ကလေးသည်လက်လွတ်လိုက်တဲ့အခါ, သင်မကြာမီတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်သင်သိရရန်သင့်အားပျော်ရွှင်စေမည်. သငျသညျမစစ်ကြောဘဲနေနိုင်လျှင်, Skype ကိုသို့မဟုတ်သင်ကင်မရာမှတစ်ဆင့်စကားပြောပေးနိုင်ပါတယ်အခြား software ကို download လုပ်ပါ. ဒါဟာတူညီတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သင်ကပိုမိုနီးကပ်စွာခံစားရကူညီပေးပါမည်.
ရောဘတ် Nishimwe Georgetown တက္ကသိုလ်မှသို့လက်ခံခဲ့သည်ရရှိ
ကောလိပ် Scan ကိုနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်
အခမဲ့ Laptop ကိုရှာပါ
ဒုက္ခသည်များ & ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကြိုဆိုတဲ့ရှပ်အင်္ကျီကိုဝယ်
အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူတို့နားလညျနိုငျတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို Send. ရရှိနိုင်ရှပ်အင်္ကျီ 8 ဘာသာစကား. "ကြိုဆိုပါတယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့မူလနေရာဖြစ်သည်, များလွန်း။"